Bitcoin dia ara-dalàna any El Salvador ary lasa firenena voalohany nanaiky azy ho ara-dalàna | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 09/06/2021 18:54 | Nohavaozina amin'ny 10/06/2021 01:58 | About us
Androany 9 Jona 2021 dia lasa daty manan-danja indrindra ho an'i Bitcoin, nanomboka Nankatoavina ny volavolan-kevitry ny filoha El Salvador Nayib Bukele avy amin'ny kongresy ao amin'ny firenena miaraka amin'ny vato 62 amin'ny 84. Miaraka amin'izany, El Salvador no lasa firenena voalohany nandany lalàna izay mamadika an'i Bitcoin ho ara-dalàna.
Ary io vao niresaka momba izany tato amin'ny bilaogy isika, ary ny filoha Salvadoriana dia mitady fahefana amin'ny bitcoin mamaha olana ara-toekarena sy ara-tsosialy marobe ao amin'ny firenena, Nandritra ny fihaonambe Bitcoin 2021 dia nanambara ny filoha Nayib Bukele fa misy volavolan-dalàna omana amin'ny Kongresy izay hahatonga an'i Bitcoin ho vola ara-dalàna ao amin'ny firenena ary izany tokoa.
"Ny tanjon'ity lalàna ity dia ny famerana ny bitcoin ho lalàna ara-dalàna, tsy voafetra amin'ny fisintomana, tsy voafetra amin'ny raharaham-barotra rehetra", azontsika atao ny mamaky ao amin'ny lahatsoratra voalohany amin'ny lahatsoratra fa izao dia tsy maintsy apetraky ny Lehibem-panjakana ao ambadiky ny tetikasa. .
Bukele dia nanonona ny mety hisian'ny vola dizitaly mba hahafahan'ny Salvadorans sahirana indrindra miditra amin'ny rafitra ara-bola ara-dalàna, manampy ny Salvadorianina monina any ivelany handefa vola mody mora foana, ary hahafahana mamorona asa.
"Amin'ny fotoana fohy, hiteraka asa izany ary hanampy amin'ny fampidirana vola ara-bola amin'ireo olona an'arivony ivelan'ny toekarena ofisialy," hoy i Bukele tao amin'ny lahatsariny.
Araka ny loharanom-baovao sasany, El Salvador dia firenena manana toekarena mitentina be vola, izay manodidina ny 70% ny mponina tsy manana kaonty banky na carte de crédit.
Ny filoha Salvadoran Resy lahatra ny fanaovana bitcoin malefaka ara-dalàna hamaha olana ara-toekarena sy ara-tsosialy marobe ao amin'ny firenena.
"Hanatsara ny fiainana sy ny hoavin'ny olona an-tapitrisany izany," hoy i Bukele.
Na dia faly amin'ny tetikasany aza i Bukele, ny sasany dia miahiahy momba ny anton-javatra toy ny tsy fivoarana ny bitcoin sy ny fikorontanana mety hiteraka amin'ny rafitra ara-bola ankehitriny.
Koa satria ny ohatra iray mazava dia ao anatin'ny telo volana, hatramin'ny Oktobra 2017 ka hatramin'ny Janoary 2018, ohatra, ny fihenan'ny vidin'ny bitcoin dia nahatratra efa ho 8%. Io dia mihoatra ny avo roa heny ny fihenan'ny bitcoin mandritra ny 30 andro mifarana amin'ny 15 Janoary 2020.
Na izany aza, Nilaza ny mpandinika fa ny fampiasana bitcoin ho vola ho an'ny firenena an-dàlam-pandrosoana izay miaina fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny mahaliana raha heverinao ny fiovaovan'ny bitcoin amin'ireo toekarena ireo raha oharina amin'ny tsy fitovizan'ny bitcoin amin'ny USD (amin'izao fotoana izao ny varotra iraisam-pirenena).
Noho io, ny mpahay toekarena sasany dia mahita an'i Bitcoin ho tahiry azo antoka na fialofana azo antoka, Hatramin'ny namaritana ny bitcoin ho toeram-piarovana azo antoka hatramin'ny nanombohany, ary ny mpandalina sy ny famoahana samihafa dia manandrana manao izany mifototra amin'ny angon-drakitra tsena ihany.
Na dia miasa tsara amin'ny fananana sy ny entam-barotra miaraka amin'ny tena faharetana eo amin'ny tsena aza izy io, ho an'ny bitcoin lalana iray hafa no mety. Ny tatitra vao haingana dia nanambara fa nampiasa azy io i Iran mba hialana amin'ny fanararaotana ny harinkarem-bolany.
Saingy manohitra an'io hevitra io ny manam-pahaizana hafa. Araka ny filazan'izy ireo, ny bitcoin dia miovaova kokoa, tsy dia misy rano ary lafo kokoa ny varotra (amin'ny fotoana sy vidiny) noho ny fananana hafa (ao anatin'izany ny volamena, ny toeram-piarovana azo antoka nentin-drazana), na dia eo ambanin'ny toe-javatra ara-barotra mahazatra aza. Mandra-pahatongan'ny fahamasahan'ny tsena, mampidi-doza ny mijery ny Bitcoin ho toeram-pialofana azo antoka.
Ankoatr'ireo ahiahy ireo dia misy ny olana amin'ny fanjifana angovo bitcoin., izay mitombo tsy mitsaha-mitombo isan-taona. Amin'izao fotoana izao, ny bitcoin dia mandany angovo elektrika bebe kokoa noho i Arzantina. Ity dia iray amin'ireo fehin-kevitra tamin'ny famakafakana nataon'ny Centre for Alternative Finance ao amin'ny University of Cambridge navoaka tamin'ny volana febroary lasa teo. Ity misy tombatombana iray hafa amin'ny fanjifana angovo an'ny tambajotra fanohanana cryptocurrency malaza amin'ny 1% an'ny an'izao tontolo izao. Mampitandrina ny manam-pahaizana momba ny toetrandro fa ny fandraisana bebe kokoa amin'ny bitcoin dia mety hiteraka korontana amin'ny angovo.
Amin'izao fotoana izao, ny fandraisana andraikitra an'i El Salvador dia tranga mitoka-monina, satria na dia nahazo alàlana tany amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao aza ny fampiasana bitcoin, mbola tsy nisy tamin'izy ireo no nandray an-tanana ny fandraisana ny lalàna ho ara-dalàna.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Bitcoin dia efa ara-dalàna ao El Salvador ary lasa firenena voalohany nanaiky azy ho ara-dalàna